Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem]
1 Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 12:28 pm
ကိုယ့်ဟာကို အပိုင်လည်းဝယ်မယ်လုပ်ကော မရွေးတတ်တော့လို့ ကျနော့်ကို အကြံဥာဏ်လေးများ ပေးကြပါဗျာ.... ကျနော် Laptop ၀ယ်မလို့ မရွှေးတတ်တော့လို့ ကူညီပါဦး.... နှစ်ခုရှိတယ်... ကျနော်ကြိုက်တာနော်... Dell တွေချည်းပဲ.... ၀ယ်ရင်လည်းကျနော်က ပိုက်ဆံလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်စုပြီးမှ ၀ယ်ရတာမို့လို့ ဈေူးနှုန်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ရတာတွေ မတန်ဘူးဆိုရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါနော်... ကျနော်လည်း အသစ်အသစ်တွေပေါ်ပေါ်နေတာနဲ့ မ၀ယ်ဖ်ြစ်တာ အဲဒါနဲ့ မ၀ယ်ဖြစ်တော့မသုံးရဘူး... အခုတော့ ၀ယ်ချင်စိတ်လေးရှိတုန်း ဒါလေးတွေ့လို့.... ကူပါဗျ.
1. CPU --- i3 (2.13)
HDD --- 250 GB
RAM ---2GB
Dell laptop 1564-DOS
price -- ($632)
Intel Core i3-330M (2.13Ghz, 4Threads, 3M cache)
15.6 " HIGH DEFINITION(1366X768) LED DISPLAY WITH TRUE LIFE
INTEGRATED GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR X4500 HD
8-IN-1 MEDIA CARD READER / 1.3MP WEB CAMERA
BUILT IN WIFI / BLUETOOTH / 10/100 LAN
BAG PACK CASE
COLOR OPTIONS/1 YEAR ON-SITE LIMITED WARRANTY NBDCK
2. CPU --- i5 (2.26)
HDD --- 500 GB
RAM ---4GB
512 MB Dedicated ( အဲဒါကို နားမလည်ပါ...)
DELL laptop 1564-NS-0052
price --- ($ 904)
ကျနော့်ကို ဒီနှစ်ခုရဲ့ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက် အကုန်လုံးကိုပြောပြပေးပါဗျာ.....
Last edited by solakoko on 27th April 2010, 10:11 am; edited2times in total (Reason for editing : TEMPORARY PLACE မှ ဤ သို့ ပြောင်း)
2 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 6:43 pm
အခု အစ်ကို ပြထားတဲ့ အတိုင်းသာဆိုရင် ရွေးရမှာက အသုံးပြုမယ့် နေရာပေါ်မူတည်နေပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းက အကွာကြီးတွေကိုး။ ဟီး။
ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့ အတော်အသင့် Performance ကို သုံးချင်ရင် နံပါတ် ၁ ကို ရွေးပါ
ပိုက်ပိုက် တတ်နိုင်တယ် Performance ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နံပါတ် ၂ ပေ့ါ
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ ဘယ်နေရာမှာ သုံးဖို့လဲဆိုတာ အရင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဟာတောင် နံပါတ် ၁ ရဲ့ ပစ္စည်းတော်တော်များများကို မမှီဘူး။
3 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 6:48 pm
ဈေးကတော့ကွာတယ်... အကိုကလောလောဆယ်တော့ ကွန်ြ့ပူတာနဲ့ပတ်သတ်တာကိုလေ့လာဖို့ကို ၀ယ်မလို့ပါ... ဒါပေမယ့် core2တွေကို သိပ်မကြိုက်တော့ဘူး... အဲဒါကြောင့်... ဒါပေမယ့် အပေါ် 1 က နည်းနည်းတော့ နိမ့်တယ်နော်.... ဘယ်လိုတွေသုံးမှာလဲဆိုတော့ အကိုက သာမန် user တစ်ယောက်လိုပဲ ဟိုဟာလေးစမ်း ဒီဟာလေးစမ်းမယ်... နည်းနည်းပါးပါး ဟိုစပ်ဟပ်ဒီစပ်ဟပ်လေ့လာမယ်.. ဒါပါပဲ.... အဲဒါတွေက အကိုတို့ဆီကို အခုမှ ရောက်တာ...
4 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 6:59 pm
ဒါဆို ၁ နဲ့ တင်အဆင်ပြေပါတယ်။
မြင့်တာကြိုက်ရင်တော့ ၂ ကို သာ ၀ယ်လိုက်။ ဟီး
5 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 7:07 pm
mars wrote: 512 MB Dedicated ( အဲဒါကို နားမလည်ပါ...)
အဲ့ဒါက Graphic Card ကိုပြောတာပါ။ Graphic Card က on board မဟုတ်ပဲ သီးခြားပါတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ရုပ်ထွက်ပိုကောင်းပါတယ်။
6 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 7:10 pm
ဟီး။ အဲဒါကို မမြင်လိုက်ဘူး။ စာသေချာမဖတ်မိဘူး။
ကို ထက်နိုင် ပြောတာမှန်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက်ပိုကောင်းတယ် ၊ ပိုဈေးကြီးမယ်။
7 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 7:55 pm
No.2 အမျိုးအစားက ပိုမြင့်တယ်။
Dedicated graphic ဆိုတော့ game အတွက်ပိုကောင်းတယ်။
graphic မသုံးတဲ့ software တွေပဲ သုံးမယ် ဆိုရင် No.1 ကသင့်တော်မယ်ထင်တယ်။
8 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 8th February 2010, 11:43 pm
ကို Mars ရေ .... အကယ်၍ များ ပိုက်ပိုက်သာတတ်နိုင်လို့ကတော့ ၂ ကိုပဲ ဦးစားပေးပါဗျာ... နောက်ပိုင်းမှာ ကို Mars အနေနဲ့ လိုအပ်တာကလေးတွေ .. သုံးစရာ အခြေအနေနဲ့ ကြုံလာတဲ့ အခါကျရင် အခက် အခဲမရှိတော့ဘူးပေါ့ ... အကြံပေးတာပါ ...
9 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 9th February 2010, 8:35 am
အားလုံးဝိုင်းပြီးအကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... ကျနော် လည်း2ကိုလိုချင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို လူက ကြပ်သွားမှာလေ.. 1 ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို လည်း ကျနော် အသေးစိတ်သိချင်တယ်... ရှင်းပြပေးလို့ရမလားမသိဘူးနော်... CPU ပေ့ါ.. အဓိက က CPU ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်... COre2(2.4) ကတော့ ကျနော်ကြည့်တာ တော်တော်လေးကိုသုံးလို့ကောင်းတယ်... အခု ကျနော့်ကောင်က (2.13 ဆိုတော့ ) ၀ယ်ရမှာ ၀ယ်လည်းဝယ်ချင်တယ်... ၀ယ်လည်းမ၀ယ်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်... ဈေးလေးကလည်း မဆိုးဘူးထင်တယ်လေ... ပြီးတော့ RAM က2GB ပဲရှိတော့ အခုခေတ်မှာ သုံးနေတာတွေက4GB ဘာညာဆိုတော့ နည်းနေသလားလို့.... ဒါပေမယ့် ပြောစရာရှိတာက သူက DDR3 လို့ပြောထားတယ်.. ကျနောလည်းမသုံးဘူးတော့ သိပ်မသိဘူးဖြစ်နေတာပါ... လောလောဆယ်တော့ အခုလက်ရှိဈေးကွက်မှာရှိနေတဲ့ core2တွေထက် နည်းနည်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် 1 ကိုပဲဝယ်ချင်တယ်... နို့မို့ တော်တော်အကြပ်ရိုက်မှာစိုးလို့.... ထပ်ပြောပေးကြဦးနော်... အခုလာမယ့် သောကြာနေ့သွားဝယ်မှာ... :cry နောက်ပြီး တခြားကောင်းတာလေးတွေရှိရင်ညွှန်းပါဦး.... ရွေးပြီးဝယ်ရအောင်လို့....
10 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 9th February 2010, 4:38 pm
မေးချင်လို့ပါ ကျွှန်တော် နားမလည်လို့ နော်
ASUS Turbo33 Technology for 33%* faster performance
Multitasking Performance with Intel Core2Duo and DDR3 Memory
Switchable Graphics for Stunning Visuals or Battery Conservation
All-day Computing with 12-hours* Battery Life
Stylishly Thin and Less than 1-inch Thick Profile
ASUS UL80VT UL80VT-WX009X Notebook Features:
Intel Core2Duo SU7300 1.3GHz Processor(SU က မတူဘူးတဲ့ ရိုးရိုး core2duo နဲ့) ရောင်းတဲ့သူပြောတာပဲ အဲ့ဒါက ဘယ်လိုမတူတာလဲ ရှင်းပြပါနော်:cry
NVIDIA GeForce G 210M , with 512MB GDDR3 VRAM
14" HD ( 1366x768 )
Battery Life: Upto 12hrs
Weight: from 2.0kg
အဲ့ဒါက ကျွှန်တော် ဝယ်ထားတာ ၂လလောက်ပဲရှိဦးမယ်US ၁၅၀၀ ကျော်ပေးရတယ် (ဝယ်တာဈေးများသွားလားလို့)
CPU --- i5 (2.26)
နားမလည်လို့မေးတာပါ ဘာတွေကွာလို့လဲလို့ processor တောင် အဲ့ဒါကမြင့်တယ်နော်
11 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 9th February 2010, 5:17 pm
Battery ဆိုလို့ ကျနော့်ပြောတဲ့ကောင်တွေကကော ဘယ်လောက်ခံလဲမသိဘူး... ကျနော်ကို ပြောပေးကြပါဦး..ကျနော့်စက်လေးကို ကျနော်ပြတဲ့ infor: တင် မဟုတ်ပဲ ရှာပြီးတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ပြောပြပေးပါဗျာ... ကျနော်လည်း ၀ယ်ပြီးမှ ဟိုဟာလေးဖြင့်မကြည့်မိဘူး... ဒီဟာလေးဖြင့် မကြည့်မိဖူး ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ... ကူညီပါဦးဗျာ... အဓိကသိချင်တာ No.1 နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်အစုံ ကို ပိုပြီးသိချင်ပါတယ်... ၀ယ်ရတာက ရန်ကုန်မှာလို မေးချင်တာမေးပြီးဝယ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ... ဒီမှာက ရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းအဲလောက်သိတာမဟုတ်.... ကိုယ်တွေကလိုချင်ရင် အင်တာနက်မှာရှာပြီးမှ အတိအကျ သွားမေးမှရတာ... အခုကသူတို့ဆိုင်က NEw arrival ဆိုပြီး နှစ်လုံးကိုကြေငြာထားလို့ ကျနော်က အဲဒိထဲကရွေးဝယ်မလို့လေ... ကူပါဦးဗျ.....
12 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 9th February 2010, 7:28 pm
Core2Duo 2.4 GHz နှင့် Core2Duo SU7300 1.3GHz Processor က မတူဘူးဗျ။
SU series က ပိုမြင့်တယ်ဗျ။ Core2Duo တွေထဲမှာ။
ရိုး ရိုး SU Series လည်းရှိ သေးတယ်ဗျ။
အဲဒါ က နိမ့်တယ်ဗျ။
Graphic က Dedicated ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ မ hang နိုင်ဘူးဗျ။
DDR3 ဆိုတော့ ပိုမြန်တာပေါ။
ဒါပေမယ့် Windows764 bit က Software တော်တော်များများနှင့် အဆင်မပြေဘူးဗျ။
Windows7သုံးရင် 32 bit က ပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျ။
13 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 10th February 2010, 12:54 pm
ဆို သားဟာပိုကောင်းတယ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ဟီဟီ
14 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 29th June 2010, 12:08 am
(၀ယ်ပြီးသွားကြပြီးထင်တယ်။ နောက်လူတွေ အတွက်ပေါ့။)
CPU ကို သတိထားဝယ်ပါ။
Mobile နဲ့ Desktop ဆိုပြီးရှိတယ်။
ဥပမာ။ ။ Intel(R) Core(TM)2Duo CPU T5670 1.80GHz ဆို Mobile series ထဲမှာ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Notebook တွေမှာ အများ အားဖြင့် CPU က Mobile series နဲ့ လာတာများတယ်။
Graphic ပိုင်းကတော့ GMA(Intel Graphics Media Accelerator) Chipset နဲ့လာတာများတယ်။ ကျွန်တော်တုန်းနေတာတော့ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ချို့ Game တွေဆိုရင် ထစ်တယ်။ MAC OS လဲတင်လို့မရဘူး။
ဆိုင်တွေက CPU ပိုင်းကို မရှင်းမရှင်းလုပ်ထားတတ်တယ်။ သေချာကြည့်ဝယ်ပါ။ ကိုယ့်စိတ် ကြိုက်တွေ့ပြီးဆိုရင် Internet မှာ အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ပါ။ ဈေးနှူန်းက အစပေါ့။ ပြီးမှဝယ်။ Ok အဆင်ပြေပါစေ။
15 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem] on 29th June 2010, 8:03 am
ITCHILD wrote: ကျွန်တော် သိသလောက်ပြောရရင်
Core2Duo 2.4 GHz နှင့် Core2Duo SU7300 1.3GHz Processor က မတူဘူးဗျ။
SU series က ပိုမြင့်တယ်ဗျ။ Core2Duo တွေထဲမှာ။
အဲဒါ က နိမ့်တယ်ဗျ။
ဒါပေမယ့် Windows764 bit က Software တော်တော်များများနှင့် အဆင်မပြေဘူးဗျ။
SU က ပိုနောက်ကျပြီးထွက်တယ်။ Hyper Threading မပါဘူး။ Single Core. ပိုမြင့်တယ်လို့တော့ ယတိပြတ် ပြောလို့မရဘူး။
16 Re: Laptop ၀ယ်မလို့ ကူရွေးပေးပါဦးဗျို့ [Problem]